အဆိုပါချန်ဒရာ Levy လူသတ်မှုဖြစ်ရပ်မှန်
ချန်ဒရာ Levy ၏လူသတ်မှု
ရော့ခ် Creek အဘိဓါန် Park မှာသူမ၏ခွေးလမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းမေလ 1, 2001 တွင်, ဝါရှင်တန်ဒီစီအလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်ခွေးလမ်းလျှောက်တစ်စုံတစ်ဦးကသူ့အကြွင်းအကျန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှစ်နှစ်သူမ၏သေသောနောက်, တစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရသူမ၏လူသတ်မှုနှင့် ဆက်စပ်. လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သူကမှာပထမဦးဆုံးကငြင်းပယ်ပြီးနောက် Levy နဲ့ကိစ္စခဲ့ကြောင်းအများပြည်သူဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းပျောက်ဆုံးအလုပ်သင်များအတွက် yearlong ရှာဖွေရေးစဉ်အတွင်းအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်များ၏နိုင်ငံရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ကယ်လီဖိုးနီးယားဂယ်ရီ Condit ဖျက်ဆီးခံရခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်ကိုကြည့်ပါ: ချန်ဒရာ Levy ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile
ဒီမှာချန်ဒရာ Levy ကိစ္စတွင်နောက်ဆုံးပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနေသောခေါင်းစဉ်:
ဇူလိုင်လ 15 ရက် 2015 ခုနှစ် - ဝါရှင်တန်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy ၏လူသတ်မှု၏ပြစ်မှုထင်ရှားထိုလူ, ဒါပေမယ့်သစ်တစ်ခုစမ်းသပ်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဒုတိယရုံးတင်စစ်ဆေးကျင်းပလျက်ရှိသည်တိုင်အောင်, အရက်ဆိုင်နောက်ကွယ်မှရှိနေပါဦးမည်။ တစ်ဦးကခရိုင်ကိုလံဘီယာ၏တရားသူကြီးရုံးတင်စစ်ဆေးစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်း Ingmar Guandique အာမခံခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေးရှေ့နေများ Guandique နှောင်ကြိုးအပေါ်ဖြန့်ချိသင့်ကြောင်းစောဒကတက်ပေမယ့်အစိုးရရှေ့နေတွေဟာတရားခံ Levy ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်နှင့်ထောင်ဒဏ် 10 နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်ဘယ်မှာတူညီတဲ့ပန်းခြံအတွင်းရှိ knifepoint မှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးတိုက်ခိုက်ခြင်းမှအပြစ်ရှိကြောင်းသောတရားသူကြီးကိုပြောသည်။
အစိုးရရှေ့နေတွေလည်း Guandique Levy ရဲ့လူသတ်မှု၏အချိန်မှာမိမိမျက်နှာပေါ်မှာရှိခဲ့ကွောငျးခြစ်လည်းသူကရာဇဝတ်မှုများ၏အပြစ်ရှိခဲ့ကြောင်းအထောက်အထားခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
တရားသူကြီးရောဘတ်အီး Morin "အခြားရာဇဝတ်မှုများအထောက်အထားနှင့် unexplained ဒဏ်ရာ" သူ၏စမ်းသပ်မှုလာမယ့်မတ်လသည်အထိထောင်ထဲမှာသူ့ကိုကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းမရှိခဲ့ကြောင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
Guandique နယူးစမ်းသပ် Get မှ
ဇွန်လ 4, 2015 - ဝါရှင်တန်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy ၏လူသတ်မှုများအတွက်နှစ်ပေါင်း 60 အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်သူတစ်ဦးက El ဆာလ်ဗေးဒိုးလူဝင်မှုတရားဝင်အမှု၌သစ်တစ်ခုစမ်းသပ်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ Ingmar Guandique 24 နှစ်အရွယ် Levy ၏လူသတ်မှုများအတွက် 2010 ခုနှစ်ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။
အဆိုပါအမှု၌အစိုးရရှေ့နေများကသူတို့ရဲ့အတိုက်အခံကျဆင်းသွားပြီးနောက်ကိုလံဘီယာ Superior တရားရုံးတရားသူကြီး Gerald Fisher က၏ခရိုင်သစ်တစ်ခုစမ်းဘို့ Guandique ရဲ့ရွေ့လျားမှုခွင့်ပြုခဲ့။
ကြားနာမှာပြီးခဲ့သည့်လက, အစိုးရရှေ့နေများသူတို့နေဆဲမူရင်းယုံကြည်ဆိုပါတယ် ဂျူရီရဲ့စီရင်ချက် မှန်ကန်သောခဲ့ပေမယ့်သူတို့တစ်တွေအသစ်များကိုစမ်းသပ်ဆန့်ကျင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကာကွယ်ရေးကိုသူတို့အယူမှားနှင့်အထင်မြင်မှားစေသောသက်သေခံချက် Guandique ရဲ့တဦးတည်းအချိန် cellmate Armando Morales ကိုပေး၏အခိုင်အမာသက်သေအပေါ်အသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်အပေါ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုအခြေခံပါတယ်။
Morales Guandique သူ Levy ရဲ့သေခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိခဲ့ဟုသက်သေထွက်ဆိုခဲ့သည်။ လူသတ်မှုမှ Guandique ချိတ်ဆက်မျှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်သောကြောင့်, သူ့သက်သေခံချက်အလွန်အရေးပါခဲ့သည်။
ကာကွယ်ရေးရှေ့နေများ Guandique သင့်ကြောင်းငြင်းခုန်ဖို့စီစဉ် နှောင်ကြိုးအပေါ်ဖြန့်ချိ သစ်ကိုစမ်းဘို့စောင့်ဆိုင်းနေနေစဉ်။
နိုဝင်ဘာ 12, 2014 - ကြားနာ၏သုံးရက်ကြာဝါရှင်တန်ဒီစီအလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy သတ်ဖြတ်၏ပြစ်မှုထင်ရှားရှိသောလူသစ်တစ်ခုစမ်းသပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်စတင်ပါပြီ။ Ingmar Guandique များအတွက်ရှေ့နေများသူဖြစ်သောကြောင့်မိမိအလူသတ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးမှာ key ကိုသကျသခေံနှင့်အတူပြဿနာများအသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ရသင့်တယ်ဆိုပါတယ်။
တရားသူကြီးတစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးဆုံးဖြတ်ချက်စေမည်မတိုင်မီအပိုဆောင်းကြားနာဖေဖော်ဝါရီလဘို့စီစဉ်ထားကြသည် Guandique အခြားစမ်းသပ်မှုပေးအပ် ။
Guandique ရဲ့ရှေ့နေများအစိုးရရှေ့နေများသိတယ်သို့မဟုတ် Armando Morales, Guandique ၏ဟောင်းတစ်ဦး cellmate ၏သက်သေခံချက်ကိုအယူမှားခဲ့ကြောင်းသိသင့်တယ်, နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
အဆိုပါရှေ့နေများအဆိုအရ Morales တကယ်တော့သူတစ်ဦးသကျသခေံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်တွင်နေရာချခြင်းကိုခံရဖို့တောင်းပြီးမှသူသည်မိမိအသက်သေဖြစ်မည်အကြောင်းပြန်ဘာမျှမတောင်းဖူးကြောင်းသက်သေခံအပါအဝင်ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာလိမ်ညာ။
Levy ရဲ့လူသတ်မှုမှ Guandique ချိတ်ဆက်မျှရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်သောကြောင့်, Morales ၏သက်သေခံချက် - Guandique သူ Levy အသတ်ခံကိုကြားပြောသော - တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရဖို့အတွက်သော့ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုရှေ့နေများကဆိုသည်။
ချန်ဒရာ Levy ရဲ့ Killer ထောင်ဒဏ်
ဖေဖော်ဝါရီလ 11, 2011 မှာ
2001 ခုနှစ်တွင်ဝါရှင်တန်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy သတ်ဖြတ်၏ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သူအဆိုပါအယ်လ်ဆာလ်ဗေးဒိုးလူဝင်မှုထောင်ထဲမှာ 60 နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ Ingmar Guandique ကသူ့ဝါကျအသံထွက်ခင်သူ Levy ရဲ့သေခြင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခဲ့ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်။
ချန်ဒရာ Levy လူသတ်မှု၏အပြစ်ရှိကြောင်း Guandique
နိုဝင်ဘာ 22, 2010
လေးရက်ကျော်ဆွေးနွေးပြီးနောက်တစ်ဂျူရီဝါရှင်တန်ဒီစီအလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy ၏ 2001 လူသတ်မှု၏အပြစ်ရှိကြောင်းတစ်ခုအယ်လ်ဆာလ်ဗေးဒိုးလူဝင်မှုရှာတွေ့ခဲ့သည်။ သူမရော့ခ် Creek အဘိဓါန် Park မှာ jogged အဖြစ် Ingmar Guandique Levy ၏ပထမဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှုနှစ်ခုရေတွက်၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရရှေ့နေတွေ Levy ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက်ရဲများကရာ၌မှားယွင်းလျက်ခံ
အောက်တိုဘာ 25, 2010
တစ်ဦးဝါရှင်တန်ဒီစီအလုပ်သင်ဆရာဝန်များ၏လူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုကာအယ်လ်ဆာဗေးဒေါလူဝင်မှု၏တရားခွင်အတွင်းထုတ်ပြန်ချက်များအဖွင့်မှာတော့အစိုးရရှေ့နေများကထိုကွန်ဂရက်ဂယ်ရီ Condit အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောကွောငျ့မူရင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေး botched ခဲ့ဝန်ခံခဲ့သည်။
ဂျူရီရွေးချယ်ရေးချန်ဒရာ Levy ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက်စတင်
အောက်တိုဘာ 18, 2010
ဖက်ဒရယ်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy သတ်ဖြတ်စွပ်စွဲမူကားယောက်ျား၏တရားခွင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာဆဲတယ်အဖြစ် 56 အလားအလာဂျူရီလူကြီးတစ် panel ကိုမေးခွန်းထုတ်ဖြည့်ဆည်းစတင်ခဲ့သည်
Levy ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက် Guandique ဆဲလ်ရှာရန်ဝန်ခံချက်
စက်တင်ဘာ 22, 2010
2001 ခုနှစ်တွင်ဖက်ဒရယ်အလုပ်သင်ဆရာဝန်၏အသေခံခြင်းဟုစွပ်စွဲလူကိုမှပိုင်ဆိုင်သည့်ကယ်လီဖိုးနီးယားထောင်ထဲမှာဆဲလ်မှရရှိသောပစ္စည်းများတရားသူကြီးတစ်ဦးအုပ်ချုပ်တော်မူပြီရုံးတင်စစ်ဆေးမှာမိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ သူချန်ဒရာ Levy ရဲ့သေခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေဖြင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရစဉ် Ingmar Guandique ရဲ့ဆဲလ်ကနေယူ items ဟာဂျူရီပြနိုင်ပါတယ်။
ချန်ဒရာ Levy ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက် Allowed ထုတ်ပြန်ချက်များ
စက်တင်ဘာ 10, 2010
ဖက်ဒရယ်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy ၏လူသတ်မှုများအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးစောင့်ဆိုင်းတစ်ဦးကသူတိတ်ဆိတ်စွာနေရန်သူ၏လက်ျာ၏အကြံပေးမခံခဲ့ရသော်လည်းမိမိအရုံးတင်စစ်ဆေးမှာသူ့ကိုဆန့်ကျင်ရာတွင်အသုံးပြု detect လုပ်ဖို့လုပ်လေ၏ထုတ်ပြန်ချက်များရပါလိမ့်မယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ Superior တရားရုံးတရားသူကြီး Gerald ဗြဲ Fisher က Ingmar Guandique ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များသည်သူ၏ကို up-လာမယ့်စမ်းသပ်မှုမှာမိတ်ဆက်နိုင်စိုးစံလေ၏။
ချန်ဒရာ Levy သံသယရှိသူနယူးစွဲချက်
ဒီဇင်ဘာလ 4, 2009
ချန်ဒရာ Levy ၏လူသတ်မှုများအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေးစောင့်ဆိုင်းလူကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုထိခိုက်ဖို့ခြိမ်းခြောက်, တရားမျှတမှု obstructing ၏စွဲချက်အပေါ်စွဲချက်တင်ထားသည်။ အစိုးရရှေ့နေတွေ Ingmar Guandique ဆန့်ကျင်သစ်ကိုစွဲချက်ကိစ္စအတွက်သက်သေခြိမ်းခြောက်သည့်တရားခံနှင့်ဆက်စပ်သောနေကြသည်ဟုဆိုသည်။
နောက်ကျချန်ဒရာ Levy လူသတ်မှုစမ်းသပ်
နိုဝင်ဘာ 23, 2009
အစိုးရရှေ့နေတွေကတော့အပေါ်စွဲချက်တင်ဖို့ပိုစွဲချက်ပေါင်းထည့်ရန်စီစဉ်နေသောကြောင့်ချန်ဒရာ Levy ၏အသေခံခြင်းဟုစွပ်စွဲမူကားယောက်ျား၏လူသတ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေး 10 လကြာရွှေ့ဆိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ingmar Guandique ရဲ့လူသတ်မှုရုံးတင်စစ်ဆေးယခုအောက်တိုဘာ 4, 2010 ကိုစတင်စီစဉ်ထားသည်။
Guandique ချန်ဒရာ Levy လူသတ်မှုများအတွက်စွဲချက်တင်
မေလ 20, 2009
လိင်ကဖက်ဒရယ်အလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy တိုက်ခိုက်ရန်နှင့်သတ်ဖြတ်စွပ်စွဲတစ်ဦးကအသက် 27 နှစ်အရွယ်လူကိုပြန်ပေးဆွဲ, ပထမဦးဆုံးဒီဂရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးနှင့်ပထမဦးဆုံးဒီဂရီလူသတ်မှု၏စွဲချက်အပေါ်စွဲချက်တင်ထားသည်။ တစ်ဦးကခရိုင်ကိုလံဘီယာ၏ခမ်းနားဂျူရီကအင်္ဂါနေ့တွင် Ingmar Guandique ဆန့်ကျင်နေတဲ့လေးစာမျက်နှာအပေါ်စွဲချက်တင်ပြန်လာ၏။
ချန်ဒရာ Levy စွပ်စွဲချက် '' အားနည်းချက်တွေကို '' ရှေ့နေများဆိုနေ
ဧပြီလ 23, 2009
အလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy ၏လူသတ်မှုအတွက်သံသယရှိသူဝါရှင်တန်ဒီစီမှပြန်လာသောနှင့်တရားဝင်သူမ၏သေမင်းနှင့်တရားစွဲဆိုကား, မိမိရှေ့နေများကသူ့ကိုဆန့်ကျင်မှုအလေးအနက်ထားချို့ယွင်းချက်ဆိုထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ Ingmar Guandique ကိုလံဘီယာ Superior တရားရုံး၏ခရိုင်ကြာသပတေးနေ့၌သူ၏ပထမဦးဆုံးရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ချန်ဒရာ Levy ဖြစ်ရပ်မှန်အတွက်ထုတ်ပေးဖမ်းဝရမ်း
ဖေဖော်ဝါရီလ 3, 2009
ရော့ခ် Creek အဘိဓါန် Park မှာသူမ၏ခွေးလမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းဝါရှင်တန်ဒီစီအလုပ်သင်ဆရာဝန်ချန်ဒရာ Levy အသတ်ခံခဲ့သည်ရှစ်နှစ်အကြာတွင်တစ်ဦးဖမ်းဝရမ်းအမှုအတွက်ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ingmar Guandique တစ်ဆာလ်ဗေးဒိုးလူဝင်မှုနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားဖက်ဒရယ်ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသား, မေလ 1, 2001 လူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖလော်ရီဒါ Death Row အကျဉ်းသား Emilia Carr က၏ပြစ်မှု
သန္ဓေသားပြန်ပေးဆွဲ: အဆိုပါ Carethia ဟင်းဖြစ်ရပ်မှန်
အဆိုပါ Oakland ကောင်တီကလေး Killer ၏ Unsolved ဖြစ်ရပ်မှန်
အောင်နိုင်သူရေကူးကန် Phobias မှမဟာဗျူဟာများ - Hydrophobia
PHP ကိုအတွက် $ _SERVER အသုံးပြုခြင်း
အိမ်သာစက္ကူ: အိမ်ထောင်စုကို Magic
တစ်ဦးကရေကူးကန်ပြိုင်ပွဲများတွင် Play - အဆိုပါကပစနှင့်အတူအသင့်ဖြစ်ပြီလား Get
"ich lade gern Mir Gaste Ein" Lyrics နှင့်ဘာသာပြန်စာပေ
ရှေးဟောငျးအီဗာဗုလုန်မြို့ကြီးများတွင် Hammurabi ရဲ့စည်းမျဉ်းအောက်မှာဘဝ
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: သင်္ဘော USS ု့ကပ်ရေး
အစ်မ Chromatids: အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဥပမာ
မှ Terra က Amata (ပြင်သစ်) - ပြင်သစ် Riviera အပေါ် Neanderthal ဘဝ
ကောလိပ် Quit လုပ်နည်း
သာလျှင်စစ်မှန်သောသိပ္ပံပရိသတ်များနားလည်ကြလိမ့်မည်ဒါက 20 ပညာရှင်အဆင့်နှင့် Funny လက်ဆင့်ကမ်းယဉ်ကျေးမှု
ဟယ်လိုအဘို့, Classical Music ကို
အဘယ်အရာကို - နှင့်အဘယ်မှာရှိ - အသင်းတော်နိုင်အောင်ဘန်ကာလား?
လူသာကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
နှစ်ဆယ်ဒေါ်လာဘီလ်အပေါ် Harriet Tubman
ဦး Edmund Cartwright ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ